မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၇၄-၇၅ခုနှစ် မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်လေးမှာဆုံဆည်းရာ မိသားစုဝင်များအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြစေဖို့ ဆုံဆည်းရာမိသားစုမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်
မိတ်ဆွေ သင့်အား ဆုံဆည်းရာမိသားစုမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်
ပင်မစာမျက်နှာဖိတ်ခေါ်ရန်သူငယ်ချင်းဖိတ်ခေါ်နည်းကိုယ်ပိုင်အိမ်အိမ်အလှဆင်နည်းCSS ကုတ်များယူရန်ဆုံဆည်းကြသူများadmin groupအထွေထွေတိုင်ကြားရန်စည်းကမ်းချက်များချက်ရွန်း စည်းကမ်းများမေတ္တာရပ်ခံချက်ဘလော့များဘလောပိုစ့်တင်ရန်ဆွေနွေးချက်များဆွေနွေးချက်တင်ရန်နည်းပညာများနည်းပညာပို့စ်တင်ရန်ကဗျာကဏ္ဍကဗျာတင်ရန်ကဗျာချစ်သူများ ဆုံဆည်းရာစာကြည့်တိုက်စာအုပ်စင် ( ၁ )စာအုပ်စင် ( ၂ )စာအုပ်စင် ( ၃ )ကဏ္ဍပေါင်းစုံစကားပြောခန်းMember RankLeaderboards
<< Facebook ဆုံဆည်းရာ သို့ >>
Facebook ( ဆုံဆည်းရာ ) တွင် လင့်လေးများချိတ်ပေးနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ..။
ဟန်းဖုန်း အသံ ( Ring TOne ) များရယူရန်
Loading feed	Welcome to sone see yar ဖလက်စ်သီချင်းလင့်ထည့်ပြီးကော်မက်ပေးရန်ကုတ်
ယနေ့ဝင်ရောက်နိင်သော အဖွဲ့ များ
ဗုဒ္ဓဘာသာမေးဖြေကဏ္ဍ မှ သင့်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏
ဆုံဆည်းရာကဗျာ ကဏ္ဍမှ နောက်ဆုံးတင်သည့် ကဗျာများ
Top News · Everything shwepyi taw7@gmail.com liked ဘာမှမမေးနဲ့'s blog post စာမဖွဲ့လောက်တဲ့ငှက်...19 hours agoမင်းသန့်leftacomment for JANNIyesterdayမနောဖြူလေး posted photos Fridaysaiminthu 1225 postedastatus"ဆုံဆည်းရာ မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော် နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။း)"Friday 0
လုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းများ
Posted by မနောဖြူလေး on June 25, 2014 at 11:16am0Comments
Posted by မောင်သုည on June 19, 2014 at 8:44pm0Comments
Posted by တတိုင်းမွှေး on June 18, 2014 at 1:49am 1 Comment
Posted by ဘာမှမမေးနဲ့ on June 17, 2014 at 11:32pm0Comments
*************~~~~~ အသိုက်ပျောက်တဲ့ငှက် ~~~~~*******************
Posted by ဘာမှမမေးနဲ့ on June 17, 2014 at 11:30pm0Comments
Posted by ဘာမှမမေးနဲ့ on June 17, 2014 at 11:28pm 1 Comment
Posted by ဘာမှမမေးနဲ့ on June 17, 2014 at 11:20pm0Comments
Posted by ဘာမှမမေးနဲ့ on June 17, 2014 at 11:18pm0Comments
Posted by Thi Thi Cho on April 17, 2014 at 9:30pm 1 Comment
အော်soneseeyar သတိရလို့ အလည်လာပါတယ် ဘာလိုလိုနဲ့အဖွဲဝင်တာ ၂နှစ်ရှိသွားပြီ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သတိရပါတယ် အက်မင်များကိုလည်း သတိရပါကြောင်း လွမ်းရဲ့သီချင်းလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအုန်းလို့ပြောချင်ပါတယ် mrtv …
Posted by လွမ်းရုံ on April 12, 2014 at 9:28am3Comments
Posted by မင်းသန့်on April 7, 2014 at 4:42pm0Comments
creator ဖေ့စ်ဘုတ် ဆုံဆည်းရာမှာ စာတင်ပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
Posted by ကြာဖြူနွယ် on March 31, 2014 at 4:06pm0Comments
Posted by Thi Thi Cho on March 28, 2014 at 10:08am 1 Comment
Posted by ပီတိ(ပေကြီး) on March 11, 2014 at 3:08pm 1 Comment
Posted by အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) on March 4, 2014 at 12:29pm2Comments
“ အချိန်ကလေးတွေ အလဟသ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေရ --- “
Posted by ကလေးတို.ဆရာမ on March 1, 2014 at 9:00pm 1 Comment
Posted by ဇော်မင်းထက် on February 13, 2014 at 4:41pm0Comments
ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ခင်လေးစားပြီး သတိတရ တမ်းတမိကြ သည်ဆိုပါလျင်
Posted by ကလေးတို.ဆရာမ on February 13, 2014 at 3:00pm3Comments
ယခင်နဲ. ယခု ယှဉ်တုလို.ရနိုင်ပါ့မလား
Posted by ကလေးတို.ဆရာမ on February 13, 2014 at 1:35pm2Comments
Started by အမည်မဲ့ in ကဗျာကဏ္ဍ. Last reply by မင်းသန့်Jun 24.4Replies
Started by nay min in ကဗျာကဏ္ဍ. Last reply by မင်းသန့်Jun 24.3Replies
ဆုံဆည်းရာ ၏ မန်ဘာ အသစ်အားကြိုဆိုခြင်း
Started by nayminthu in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by လင်းထက်သာ Jun 23. 35 Replies
သိတဲ့ လူများ ကူညီပေးကြပါ ...ခင်ညာ...
Started by MOe sAt lAy in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by OnlineCrazY Apr 2.3Replies
မိမိ computer ကို software မပါဘဲ အမိန့် ပေးပြီး ခိုင်းမယ်....
Started by nayminthu in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by zarmani Mar 25. 1 Reply
ဆုံဆည်းရာက က ကိုကို မမတိုအတွက် အသုံးဝင်စရာ Short-cuts Key လေးများ
Started by nayminthu in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by zarmani Mar 23. 1 Reply
Facebook အကောင့်နှင့် Gtalk အကောင့်အသစ်ဖောက်နည်းများ (ဖတ်ကြည့်ပါ 100% ရစေရမယ်ဗျ)
Started by မောင်ပလာတူး...ကိုမလာဘူး in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by ဇော်မင်းထက် Feb 25.2Replies
☆☆☆ဒီဇိုင်းအမိုက်လေးတွေ လုပ်ပြီး မိမိသူငယ်ချင်း(သို့မဟုတ်)မိမိချစ်သူတွေကို အလန်းဆုံးလေတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်☆☆☆
Started by ♫★မာစတာဘင်း♫★ in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by ye lwin Jan 9. 13 Replies
Internet Download Manager 7.01 Pre-activated Full version free
Started by OnlineCrazY in နည်းပညာဆိုင်ရာ Jan 8.0Replies
facebook သုံးမရလို့ ပါ
Started by အောင်မော်မိုး in နည်းပညာဆိုင်ရာ. Last reply by နတုံး Jan 4.4Replies